Waa goorma maalinka koowaad ee RAMADAAN? - Caasimada Online
Home Warar Waa goorma maalinka koowaad ee RAMADAAN?
Waa goorma maalinka koowaad ee RAMADAAN?
Makkah (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhowaaqday in maalinta berri oo khamiis ah ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan.
Sidoo kale, Caalamka islaamka intiisa badan ayey maalinta Khamiista ah ee ku beegan 18.06.2015 u tahay maalinta u horeysa bisha barakaysan ee Ramadan.
Dhamaan shaqaalaha Caasimada Online waxay farxadda la wadaagayaan akhritayaasheeda, waxaana leenahay rabbi ha inaka aqbalo camalka kiisa wanaagsan. RAMDAAN KARIIM